Nyaya yeZimbabwe Yozeyiwa neAfrican NGOs Forum
Mbudzi 13, 2007
Masangano anorwira kodzero dzevanhu apedza musangano wawo nhasi we African NGOs Forum uyo wanga uchiitirwa kuCongo Brazeville.
Pamusangano uyu nyaya yeZimbabwe yabatwa batwa zvikuru uye kwabuda zvisungo zvichapihwa musangano we African Commission uyo uri kutanga neChitatu. Masangano akazvimirira oga aya anoti hurumende yaVaMugabe iri kuenderera mberi ichityora kodzero devanhu.
Nokudaro masangano aya anoti African Union inofanirwa kupindira panyaya yeZimbabwe, kuitira kuti zvinhu zvigadzirisve. Anotizve hurukuro dziri pakati peMDC neZanu PF, dzinofanirwa kusanganisira nhengo dzemasangano akazvimirira oga sezvo nyaya iri kunetsa muZimbabwe, isiri yeMDC neZanu PF chete.
Ukuwo nyaya yegweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaGabriel Shumba, yekushungurudzwa kwavakaitwa nehurumende yanga ichifanirwa kutanga kutongwa mudare re African Commission on Human and People’s Rights neChitatu haichazotangwa nekuti hurumende haisati yaendesa mapepa ayo kudare iri.
Ntungamili Nkomo weStudio 7 abata VaShumba pachavo vari kuCongo Brazeville vanova zvekare mutungamiri wesangano reZimbabwe Exiles Forum kuti tinzve zvizere nemusangano wapera neChipiri uyu uye nezvenyaya yavo.